सबैभन्दा rzhachnye कमेडी
परिवार र साथीहरू को कम्पनी मा न्यानो साँझ मा heartily, हाँस्न आफ्नो समस्या बारे भूल र बस मजा चाहन्छु। यो अन्त गर्न, हामी तपाईंलाई सबैभन्दा rzhachnye कमेडी सहित शीर्ष प्रस्तुत।
हाम्रो विचारमा, सबैभन्दा हास्यास्पद किशोर कमेडी क्षणमा "Eurotrip" छ। यो फिल्म सबै जोडती: otvyaznye पक्षहरू अविश्वसनीय साहसिक, तीव्र Jokes, रोमान्स र खुसी अन्त्य। यो फिलिम को हाइलाइट यसलाई युरोपेली देशहरूमा सबैभन्दा हडताली विशेषताहरु, गुणवत्ता हास्य संग स्वादिष्ट देखाउँछ छ।
प्लट स्कट नाम एक मान्छे आसपास घूमती छ। उनले उच्च विद्यालय स्नातक थियो, त्यो केटी सबैलाई यो भन्दा आषा व्यक्ति सोच्छ साथै, उहाँले grandly इन्टरनेट पत्राचार आफ्नो मित्र बारेमा गलत फाले, तर अझै पनि। उहाँले एक वर्ष जर्मनी ले एक मान्छे संग कुराकानी भएको थियो थियो भन्ने तथ्यलाई। तिनीहरूले धेरै घनिष्ठ मित्र हो, तर आफ्नो जर्मन मित्र एक बिन्दुमा स्पष्ट आशय बनाउन थाले। निस्सन्देह, हाम्रो स्कट यसलाई सहन भएन, र टाढा जर्मन bugger पठाए। उहाँले सारा वर्ष रातो pimply बेवकूफ कुराकानी छैन, कि र एक सेक्सी जर्मन गोरा सिकेका जब आफ्नो आश्चर्य कल्पना! र अब उहाँले यो केटी संग हुन र "श्री predictability" शीर्षक को हटाउनु केहि गर्न इच्छुक छ। र यो लागि उहाँले आफ्नो को कम्पनी मा युरोप भर एक अविश्वसनीय यात्रा गर्न हुनेछ राम्रो मित्र। यो फिल्म निश्चित हाम्रो सूचीमा जानु पर्छ "rzhachnaya कमेडी।"
यो सूचीमा दोस्रो स्थानमा मित्रता र प्रेम बारे मा एक कहानी छ। एक पटक एक समय मा एक बच्चा protagonist आफ्नो टेड्डी जीवनमा आएको बताउने एक इच्छा गरे। र लो र हेर! Mishutka जादुई चलाउन, जम्प र भाषण गर्न थाले। तिनीहरूले सबै भन्दा राम्रो साथी भए। तर समय बितिसकेको र एक सानो केटा को नायक एक हुर्किसकेका मानिस मा गरिएका छ, र भालु क्रूरता र उत्कृष्ट प्राप्त हास्य को अर्थमा। त्यसैले तिनीहरू, बाहिरै, प्रत्येक अन्य पूरक बस्ने र केही आफ्नो प्रेमिका संग protagonist को सम्बन्ध जस्ता समय सम्म पछि देख्यो नयाँ, थप गम्भीर चरण सारियो छैन। त्यो राम्रो बन्न, माथि बढ्न र तथापि, फेरि सोच्न पनि रोक्न गर्दैन यो अन्य-भालु, मा गुमाउन छैन कसरी सोच्न गर्न protagonist थियो।
यो फिलिम को श्रेणी मा आएको केही लागि छैन "rzhachnaya कमेडी।" सूची हुनत लाग्यौं छ, र थप पुरानो फिलिम, तर "टेड" उहाँलाई उपज थिएन। ठोस हास्य, प्रेम लाइन र अचम्मको एनिमेटेड भालु moviegoers प्रभावित हुनेछ। हामी के भन्न सक्छौं, टेड, मुख्य भालु यो फिल्म इन्टरनेटमा धेरै हास्य र मिम्स एक नायक भएको छ। अन्य कुराहरु, यो Mila Kunis र एकदम मधुर स्वर यो कमेडी मा फिट र हाम्रो सूची मा एक ठाउँ जीत मदत छ मार्क Wahlberg, को उत्कृष्ट अभिनय जोडी टिप्पण लायक छ "rzhachnaya कमेडी।"
3. "द Hangover"
यो चलचित्र ठीकै एक क्लासिक नयाँ कमेडी फिल्म सकिन्छ। यसको बारे बिहान एक महान् Booze पछि कसरी हार्ड एक फिलिम बनाउन छैन कति प्रयास हुनेछ, पट्टी समात्नुहोस् "द Hangover" एकल तस्वीर मा सफल भएको छैन। खैर, फिल्म को मूल शीर्षक - "द Hangover" - धेरै यो कमेडी को सार झल्काउँछ। फिल्म गुणस्तर मा भएको पेटी कार्यालयमा, तपाईं यो कथा को सम्पूर्ण ट्रिलजी मनन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई देखि न्याय गर्न सकिन्छ। सोही, तेस्रो फिल्म "हिरन" - 2013 मा निश्चित सबैभन्दा rzhachnaya कमेडी। प्लट banal देखिन्छ, तर मलाई सबैले आफैलाई पाउन सक्नुहुन्छ जो यी चम्केको मजाक र परिस्थिति विश्वास हुनत, तपाईं देखेको छैन। एक हत्यारा डाली र कालो हास्य, र तपाईं ठीकै पनि प्रविष्ट छ जो यो धेरै ककटेल प्राप्त थप्न "rzhachnaya कमेडी।"
र कुरा त थिए। उपाध्यक्ष र debauchery को शहर - चार मित्र केवल कहीं, एक स्नातक पार्टी मनाउन गए, तर मा भेगास। निस्सन्देह, अर्को बिहान तिनीहरूले कोठा मा मात्र होइन हार, एक भयानक दुखाइ र सुक्खा रूखहरू, तर पनि तिनीहरूले दुलहा नष्ट गरेको बोध लागि प्रतीक्षा थिए ...
तामबोभ सिनेमाहरू: ठेगाना दर्जा
जासुसहरूलाई बारेमा रूसी र विदेशी चलचित्र: सूची। जासुसहरूलाई र एजेन्ट बारेमा चलचित्र: सबै भन्दा राम्रो को एक चयन
तारा बच्चाहरु: Uillou Smit - Uilla Smita को छोरी
होटल "पर्यटक", Yaroslavl: ठेगाना, कोठा को वर्णन
असामान्य जनावर: Przewalski घोडा
लक्षण, उनको रोग को रोकथाम र उपचार: जिगर दुख्छ।
प्रसिद्ध हलवाई Renat Agzamov। केक, कला काम भएको छ
विकास प्रमाण। भ्रूणविज्ञान, कोशिकाविज्ञान, biogeographic प्रमाण: उदाहरणहरू
रक्सी को विशेष गरी सिर्जना। रक्सी distillates
Lantratov व्लादिस्लाव: सधैं फरक र अप्रत्याशित Bolshoi थियेटर
प्रोसेसर कूलर कसरी खोल्ने गर्ने? सर्वश्रेष्ठ सीपीयू कूलर
Ekaterina Sergeevna Lavrova: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, नागरिकता
म "एन्ड्रोइड" बाट कुनै त्रुटिहरू एउटा अनुप्रयोग कसरी मेटाउन गर्छन्